Ndị na-anya mmiri Steam, mmanụ ụgbọ mmiri, mmiri ọkụ mmiri - Goodao Technology Co., Ltd.
Esi mmiri ọkụ mmanụ
Plagbọ Mmiri Ike
Igwe ọkụ Steam
Oku Mgbata Ozo
Igwe mmiri na Steam & Hot Water
Ngwa ilergbọ mmiri
Ọrụ ntinye & Teknụzụ
Foto Factlọ Ọrụ
Njikwa mmepụta & njikwa
Afọ 50 'Boiler Manufacture Experience
Ngwunye ọkụ na-ere ọkụ Ebe a na-ere ọkụ dị mfe - Echichi Mfe dị ala dị ala Mmanụ mmanụ Rice Husk Pellets wdg mmeghe: Biomass Steam Boiler bụ kwụ n'ahịrị azụ azụ mmiri atọ na-ere ọkụ na-ere ọkụ. Dozie eriri ọkpọ na mmiri na mgbidi ọkụ mmiri na-edozi n'akụkụ aka nri na n'akụkụ aka ekpe nke ọkụ ahụ. Na ìhè yinye grate stoker maka n'ibu nri na site na nkuzi fan na ikuku mmiri maka ikuku ikuku, na-aghọta taphole n'ibu scraper slag remover. Hopper nke mmanụ na-ada ka ...
Hụ ngwa ahịa ndị ọzọ >
Ugboro abụọ Drum Steam ji esi mmiri ọkụ
Coal Steam Boiler-eji ya na nri, akwa, plywood, akwụkwọ Brewery, Osikapa wdg. Okwu Mmalite: SZL Series gbakọtara mmiri igwe mmiri na-agba mmiri ogologo mmiri ogologo mmiri okpukpu abụọ. The ji esi mmiri ọkụ ahu mejupụtara elu & ala longitudinal rụọ na convection tube, kasị mma kpo oku elu, elu kwes arụmọrụ, ezi uche imewe, kọmpat Ọdịdị, mara ọdịdị, zuru mmetụta. Akụkụ abụọ nke ụlọ ọrụ Combustion kwadebere ọkụ ọkpọkọ ikuku mmiri, mmiri na-adọpụta ikuku ...
Gas Steam ji esi mmiri ọkụ
Mmeghe: WNS usoro uzuoku ikuku mmanụ na-ere ọkụ ma ọ bụ gas bụ Horizontal esịtidem ọkụ ọkụ azụ nke azụ azụ azụha ọkụ atọ, adopts ụlọ ọrụ na-ere mmiri na -emeghachi azụ, anwụrụ ọkụ dị elu, gas na -eme ka ihe otite azụ nke anwụrụ nke abụọ na nke atọ, wee banye n'ọkụ anwụrụ ọkụ. atọrọ ikuku na ikuku. Enwere Skokebox Cap na ihu na azụ na mmanụ ụgbọ mmiri, ọ dị mfe mmezi. Magburu onwe burner adopts combustion akpaka ruru ukpụhọde, feedwater ...
Biomass Osisi Igwe Igwe Na-ekpo ọkụ
Igwe mmanụ ikuku Thermal eji na akwa, nri, rubber, akwụkwọ, plastic, osisi, akụrụngwa Iwu wdg Njirimara: 1. Ọdịdị zuru oke nwere ezi uche na kompeni, dị mfe ịwụnye. 2.Advanced design, Complete Ọdịdị 3. Mfe mmiri ozuzo, ezi uche Ọdịdị nke mgbali akụkụ, ekwe nkwa mmiri mma, mma na-agba ọsọ 4. Complete Ancillary akụrụngwa, elu mbara technology
SHX ekesa Fluidized ndina ji esi mmiri ọkụ
Okwu Mmalite: Dị ka ụdị ọhụụ tozuru oke nke tozuru etozu yana teknụzụ na-emetọ ikuku dị ala. ịgbasa fluidized bed combustion (CFBC) teknụzụ adịghị ka ndị ọzọ na ọ nwere ọtụtụ njirimara pụrụ iche. 1. Igwe mmiri na-enwete ọkụ dị ala na-ebu ọkụ, n'ihi ya, ikuku oxygen na-eme ka ikuku mmiri na-ere ala dị ala karịa nke a na-ere unyi ntụ, na mmiri dị otú ahụ nwere ike imebi ya ozugbo n'oge usoro nsị. Culagagharị fluidized bed ji esi mmiri ọkụ na elu desulfuriza ...
Autoclave na esi mmiri
Autoclave-Popular eji na ACC Osisi, Flyash Osisi, Owuwu ihe wdg. Autoclave Njirimara 1, mbụ anụ ụlọ mmepụta nke autoclave ọkachamara factory. 2, mmepụta akara ọgbakọ, ịgbado arụmọrụ niile, ogo na ntụkwasị obi. 3, ihe ndị nrụgide niile 100% nyocha X-ray na-achọpụta, ụzọ nchọpụta dị elu. 4, ngwaahịa dị ka ụlọ ọrụ dum, ihe dị elu ma nwee ezi uche, oge ntinye nke dị mkpirikpi, ọnụ ahịa itinye ego dị ala. 5, nke enyere ya n'ụzọ zuru ezu, site na akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ com ...
Mmeghe: Nrụ ọrụ arịa na-arụ ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ mmanụ ala, ụlọ ọrụ ike, nyocha sayensị na ngalaba ndị agha wdg. Mkpuchi arịa ahụ na-enwe cylinder, isi akara, flange, akara ihe, oghere mepere emepe, pore na njikọ njikọ, na-amị. Na mgbakwunye, ejikwa ngwaọrụ nchekwa, mita na internals nchekwa maka ebumnuche nchebe. Nrụpụta nrụpụta Vetel Main Performance paramita ndepụta Steam mgbali1.0Mpa Inlet okpomọkụ 250 ℃ S ...
Okwu Mmalite: Nrụgide Vessel Main Performance Parameter List Steam Stein1.0Mpa Ọdụdọ 250 250 Okpomoku Na-ekpo ọkụ 179 ℃ Mmiri Na-ekpo ọkụ ： Okpomoku Ido mmiri 90 ℃ ； Ọkpụkpụ Ọpụpụ 140 ℃ Nmepụta arụmọrụ zuru oke na-arụ ọrụ nke igwe dijitalụ ịgbanwee njikwa sistemụ sistemu hotara usoro ihe eji emebe ihe di omimi. , kpo oku mmemme usoro a ga-amata usoro ihe na-akpaghị aka ịgbanwee ịgbatị ndụ mpaghara Na akpaka nsị Na akpaka wa ...
Ọkachamara Mmepụta ilerlọ Ọrụ Ọkachamara
Nkowa di nkenke ：
Xuzhou Double Rings Machines Co., Ltd bụ nke Golden Moon Group, ụlọ ọrụ ọkachamara nke mmanụ ọkụ ikuku, Coal Boiler, mmanụ gas mmanụ, Thermal Mmanụ ụgbọ mmiri, Circulating Bed, Autoclave, Vessel, Electric Steam Boiler, Steam & Hot Water Pipe and Boiler ngwa mgbakwunye .
Ndị otu anyị kpuchitere mpaghara 950000 square. Imepụta Osisi dị ihe dị ka 50000 square. Nwee ọrụ zuru oke nke Nchọpụta Sayensị, Nlụpụta, Ọrịre na Nwụnye Ngwaọrụ tozuru oke na igwe nyocha iji hụ na ngwaahịa ahụ kacha mma.
OZIHI & AKW .KWỌ AKCTKỌ
XUZHOU abụọ yiri mgbaaka igwe CO., LTD
Transportationgbọ njem na nnabata
Na-ebugharị ndagwurugwu mmiri na-efegharị （CFB） nwụnye --- 45Ton 5.3 Mpa na-ebugharị mmiri ọkụ na-efegharị. Mgbe ọ nọsịrị afọ dum nke 2016 iji kwurịta, 45 T 5.3 Mpa Circulating Fluidized bed Boiler bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ wee rụpụta ya. Ugbu a, ndị Circulati…
DZL Chain Grate Steam ji esi mmiri ọkụ
1T DZL yinye Grate Steam ụgbọ mmiri rụchara nwụnye Mgbe emechara ụbọchị 7, ndị ọrụ nrụnye mechara nwụnye 1T DZL Chain Grate Steam Boiler ...
Izụ ahịa na mbupụ ụgbọ mmiri ọkụ
A ga-enyefe Boiler Mbupu --- SZL 10Ton Water Tube Coal Fired Steam Boiler na Indonesia Ebe Ahịa Mgbe Indonesia zụtara anyị mbụ 6 Ton Steam ji esi mmiri ọkụ, ọ bụ ha abụọ ji esi mmiri ọkụ maka 10 Ton Water tube Kol Fired Steam ji esi mmiri ọkụ. Na mkparịta ụka enyi na enyi, t ...
28 # Beijing North Road, Tongshan New District, Xuzhou, Jiangsu, China
Ngwaahịa dị ọkụ, Ebe nrụọrụ